I-Cavitation Erosion Testing ASTM G32-92 - Hielscher Ultrasound Technology
Ukulawulwa kwe-ultrasonication okulawulwayo futhi okukhiqizayo kuyadingeka ukuze kwenziwe ukuhlolwa kokuguguleka komhlabathi ngokuhambisana I-ASTM Standard G32-92. Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic angasetshenziselwa ukuhlolwa kokuguguleka okuqondile nokungaqondile kwamasampuli.
I-Hielscher ikhiqiza amaprosesa e-ultrasonic, anakho imvamisa ehleliwe (isib. 20kHz) kanye no amplitude adjustable. Amadivaysi anjalo e-ultrasonic angasetshenziselwa ukuhlolwa kokumelana nokukhuphuka kwempahla ngokusho kwe I-ASTM G32-92.
Ukuhlolwa kwe-cavitation Erosion akugcini ekucacisweni kweleveli ye-ASTM G32. Ngemininingwane eminingi ngokuhlolwa kwegodi yokuguguleka, sicela uchofoze lapha!
Ukusetha okujwayelekile (isithombe esifanele) ukuhlolwa kokukhukhula kuqukethe:
isitsha esineziphuzo (ehlile) isitsha esiphuthumayo
Uma kwenzeka cavitation ngqo, isampuli sinamathele kuphuzu le-sonotrode. Uma kwenzeka cavitation engaqondile ukuhlolwa, isampula ibhekene ne-sonotrode ebangeni lika-0.5 kuya ku-0.7mm kusuka enkampini ye-tip sonotrode.
Umswakama ngamanzi acwecwekile ku-25 ± 2 degC ngokucindezela okukhulu.
Ukuze uthole imiphumela enembile kubalulekile ukugijima kumakhilomitha athile, isib. Ku-50 micron. Ama-processors ama-Hielscher ultrasonic aqaphele amplitude yemishini njalo 1/20000 yesibili (20kHz). Lokhu kuqinisekisa, ukuthi isampula ivuliwe ku amplitude enembile ngesikhathi sokubeletha esigcwele.
Ukusethwa Kokuhlolwa Kwesimo se-ASTM G32-92
Amadivayisi UIP500hd, I-UIP1000hd futhi I-UIP2000hd kufanelekile I-ASTM G32-92 ukuhlolwa. Singahambisa ngayinye yalezi zinyunithi ngokunembile amplitude isilinganiso protocol we amplitude mechanical at the tip sonotrode. Sincoma ukusebenzisa lawa madivayisi nge-sonotrode BS2d22 (ububanzi obungama-22mm) kanye ne-stand ST2.
Sicela usebenzise ifomu elingezansi, uma ufisa ukucela ulwazi oluthe xaxa mayelana nokusetshenziswa kwe-ultrasound ekuhlolweni kokuguguleka komhlabathi ngokusho kwe-ASTM G32-92.
Isethaphu yeSimethri yokuhlolwa kwe-ASTM G32-92
(umthombo: ISAF, TU Clausthal)
Ukwenza ngcono ukuphikiswa kwe-Erosion ye-TiAl6V4 (i-PDF, isiJalimane)